Global Voices teny Malagasy » Brezila: Mpanao Gazety Sady Bilaogera Novonoina Tao São Luís, Maranhão · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Avrily 2012 9:12 GMT 1	 · Mpanoratra Raphael Tsavkko Garcia Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
[Teny Portiogey avokoa ny rohy ankoatra izay lazaina manokana]
Tifitra roa teo amin'ny lohany raha kely indrindra no namonoana  ilay Brezilianina mpanao gazety sady bilaogera Décio Sá tamin'ny alin'ny alatsinainy 23 Avrily tao amin'ny trano fisotroana iray be olona indrindra ao an-tanànan'i São Luis, any avaratra atsinanan'ny fanjakana Maranhão. Manazava ny bilaogera Candido Cunha:
Milaza ny vavolombelona fa nipetraka izy raha nisy olona nanondro ilay mpanao gazety tamin'ny basy sady nitifitra azy indroa teo amin'ny lohany, ka nahafaty azy teo noho eo. Lasa ilay mpamono olona nandeha ary nandositra.
Mpanangom-baovao tao amin'ny gazety O Estado do Maranhão i Décio Sá. Nanangona ny lahatsoratra be mpamaky sy ny adihevitra sasantsasany navoaka lahatsoratra amin'ny endrika tsikera ary ny lohahevitra nohadihadiana lalina ao amin'ny bolongana azy manokana izy. Nanokana ny asany hiompana amin'ny politikan'ny Maranhão izy ary be mpamaky indrindra ao amin'ny fanjakana.
Samihafa ny lazain'ny loharanom-baovao, misy miteny fa voatifitra in-droa izy, ny hafa miteny fa voatifitra in-telo  izy ary misy hatramin'ny tifitra enina , efatra teo amin'ny lohany ary roa eo amin'ny lamosiny.
Tao amin'ny Avenida Litorânea (Lalambe Amorontsiraka), iray amin'ny lalana manana ny lanjany sy be mpivezivezy indrindra ao an-tanànan'i São Luis, izy araka izay velabelarin'ny  mpamahana bolongana sady mpanao gazety Rogério Tomaz Jr, azy ao amin'ny Twitter:
@rogeriotomazjr : Ny Lalambe Litorânea no toerana ahitana fialam-boly be indrindra ao São Luís. (ara-petrakevitra) Misy fiaran'ny polisy mivezivezy hatrany io! Tsy voahevitra mihitsy ny isian'ny famonoana ao!
Efa manahirana ihany ilay famonoana, misy ambadika politika miharihary, natao tany amin'ny toerana be olona hoy  ny manamboninahitra polisy Caetano Pacheco. Na izany aza, hita mirona amin'ny fifandraisan'i Décio Sá amin'ny fianakaviana Sarney, izay nitondra ampolony taona, ny adihevitra an-tserasera. José Sarney  [en], loham-pianakaviana no filohan'ny Antenimieran-doholona, ao Brasília, ary ny zanany vavy, Roseana Sarney  [en], no governoran'i Maranhão.
Mampahatsiahy  ny mpisera Twitter Arthur Santos avy ao São Luis:
@arthurxside : Tena ilaina ny manamarika fa manana fifandraisana lalina amin'ny fianakaviana Sarney i Décio Sá.
Na dia sarotra aza ny mino fa mety ho nisy fifandraisana  tamin'ny fahafatesan'i Décio Sá ny fianakaviana , namelatra petrakevitra mahasolo nalefany  Twitter.
Niasa tao amin'ny gazety Décio worked for O Estado  avy ao amin'ny Vondrona Mirante  – orinasam-pampitambaovao ahitana radio sy fahitalavitra anatin'ny vondrona Globo  [en] izay ny fianakaviana Sarney no tompony i Décio. Mamahana ao amin'ny Blog do Décio  izy ary mamely  hatrany ny mpanao politika manana ny tanjany ao amin'ny fanjakana misy azy.
Nanampy  i Rogério Tomaz Jr:
@rogeriotomazjr : Nahavoa olona iray indray ny andian-jiolahy voaomana ao Maranhao, izay nisy am-polony taona hampaharitra an'i Sarney. Mpanao gazety no voany tamin'ity indray mitoraka ity.
Niteny ny  mpahay tantara avy ao Maranhão, Wagner Cabral (@wagner_cabral), fa “efa mahazatra ao Maranhão ny herisetra sy ny famonoana ny mpiasa tambanivohitra… sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona” ary nampiany :
@wagner_cabral : Ankehitriny, tafakatra dingana vaovao ny herisetra rehefa bilaogera manana fifandraisana amin'ny olombitsy mitantana no misy mamono eto an-drenivohitra … mipoaka ny faharangitan'ny fiaraha-monina
Namoaka nysarin'ny vata-mangatsiakan'i Decio tao amin'ny Twitter  sy tao amin'ny bolongana  vantany vao nisy ny famonoana ny mpanao gazety Ricardo Noblat, ary nanao izany ihany koa tamin'io sary io ihany ny vondrona Mirante, izay namoaka ny sary  ahitana ny vata mangatsiakany eo amin'ny takelaka fandraisana [renim-pejy]. Niteraka tsikera  azo lazaina ho mavesatra  ao amin'ny aterineto ny nametrahana ny sarina vata-mangatsiakan'ny mpanao gazety eo amin'ny renim-pejin'ny vohikala na bolongana.
Nihantsy an'i Noblat ny mpanao gazety Rogério Tomaz Jr “hanome antony TOKANA maharesy lahatra ny fametrahana sarin'ny maty novonoina amin'ny bolongana” ary niangavy  ny fianakavian'i Décio hitory azy.
Araka ny  ny kaonty Twitter an'i Noblat, 40 ny calibre ny basy nampiasaina tamin'ny famonoana izay ny polisy irery ihany no manana azy.
Apetraky ny ONG Iraisampirenena Reporters Sans Frontieres eo amin'ny laharana faha-99  i Brezila eo amin'ny fahalalahana manao gazety
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/04/27/32550/
 no namonoana: http://candidoneto.blogspot.com.br/2012/04/blogueiro-e-executado-em-sao-luiz-do.html?spref=tw
 voatifitra in-telo: https://twitter.com/#!/pedrovenancio/statuses/194631590331162625
 tifitra enina: https://twitter.com/#!/pedrovenancio/statuses/194639165768474624
 mety ho nisy fifandraisana: https://twitter.com/#!/arthurxisde/status/194632238544068608
 Vondrona Mirante: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Mirante
 vondrona Globo: http://en.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
 Niteny ny: https://twitter.com/#!/wagner_cabral/status/194625690925142016
 tao amin'ny Twitter: https://twitter.com/#!/BlogdoNoblat/statuses/194638941557751809
 namoaka ny sary: http://twitpic.com/9damf0
 Nihantsy an'i : https://twitter.com/#!/rogeriotomazjr/statuses/194650349112532992
 Araka ny: https://twitter.com/#!/BlogdoNoblat/status/194641323729485824
 eo amin'ny laharana faha-99: http://oglobo.globo.com/pais/assassinatos-de-jornalistas-brasileiros-repercutem-no-mundo-3974920